सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश ब्ल्याकज्याक वास्तविक पैसा क्यासिनो अनलाइन - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » ब्ल्याकज्याक
वास्तविक पैसाको साथ ब्ल्याकजेक खेल्दै
ब्ल्याकजेक अनलाइन के हो?
ब्ल्याकजेक कसरी खेल्ने
ब्ल्याकजेकको आधारभूत नियमहरू
ब्ल्याकजेकका लागि आधारभूत रणनीति
ब्ल्याकज्याक अनलाइन खेल्नुहोस्
सबै तपाईं अनलाइन ब्ल्याकजेक को बारे मा जान्नु आवश्यक छ!
अनलाइन जुवा कार्डहरू खेल्न र सम्भवतः केहि पैसा जित्नको लागि रमाईलो तरिका हुन सक्छ। यद्यपि त्यहाँ केहि सावधानीहरू छन् जुन कसैले पनि वास्तविक पैसालाई अनलाइनमा ब्ल्याकज्याक खेल्नु अघि लिनै पर्छ। यो एक बजेट सेट गर्न महत्वपूर्ण छ र कहिल्यै एक जित्न को लागी अधिक पैसा जोखिम को लागी जित्न कहिल्यै जीत को ग्यारेन्टी छैन।
रक्सीको प्रभावमा कहिले खेल्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसले एकको न्यायलाई बाधा पुर्‍याउँछ र कहिले रोक्ने भनेर जान्न गाह्रो बनाउँदछ। अन्तमा, कुनै पनि जित जित्नको लागि लक्ष्य सेट गर्नु भनेको भविष्यका हातहरूमा नाफा मात्र जुवा खेल्ने छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने उत्तम तरिका हो।
त्यहाँ धेरै तरीकाले तपाईं ब्ल्याकजेक खेल्न सक्नुहुनेछ, जस्तै ईंट-र-मोर्टार क्यासिनोमा वा पीसीमा लगभग लाइभ। प्रत्यक्ष ब्ल्याकजेक अनलाइन तपाईंलाई दुबै संसारको उत्तम दिन्छ। तपाईं एक प्रत्यक्ष डिलरको साथ एक वास्तविक गेमिंग टेबलमा खेल्नुहुन्छ, तर तपाईंलाई यो क्यासिनोमा जान आवश्यक पर्दैन।
अक्सर वास्तविक क्यासिनोमा फिल्माइएको, प्रत्यक्ष ब्ल्याकज्याक अनलाइनले चलाखीको क्यामेरा कार्य र उन्नत क्यासिनो सफ्टवेयर प्रयोग गर्दछ जुन तपाईं कहाँ खेल्न चाहानुहुन्छ तपाईंलाई खेलको थ्रिल प्रदान गर्न। तपाईले सबै साना विवरणहरू देख्नुहुनेछ जस्तो कि कार्डको डिलि .्ग र प्रायः तपाईं डीलरसँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
ब्ल्याकजेकमा खेलको उद्देश्य अधिक भन्दा बढि २१ सम्म सकेसम्म स्कोर गर्नु हो। तपाईं कार्ड ड्राइंग राख्नुहुनेछ जब सम्म ‘Busting’ को जोखिम तपाईंको विरूद्ध हुँदैन। खेलाडीहरू ब्ल्याकज्याकमा एक अर्का बिरूद्ध कहिले पनि खेल्दैनन्। यसको सट्टामा, उनीहरूले डिलरको हात जित्नुपर्नेछ।
जब यो ब्ल्याकज्याकमा खेल्ने तपाईंको पालो हो, तपाईं अर्को कार्ड कोर्न ‘हिट’ गर्नुहोस् वा तपाईंसँग भएकोसँग टाँस्न ‘स्ट्यान्ड’ गर्नुहोस्। सबै खेलाडीहरू दुई कार्ड फेस-अप व्यवहार गरिन्छ, डिलर बाहेक जसले एक कार्ड अनुहार राख्दछ। तपाईंले आंशिक रूपमा डिलरको कार्डमा आधारित तपाईंको हात खेल्नु पर्छ। ऐसहरू १ वा ११ रूपमा गणना गरिन्छ।
प्रत्येक खेलाडीलाई दुई कार्ड फेस-अप गरे पछि, घडीको दिशाबाट सुरू हुन्छ। यदि डिलरको एकल प्रदर्शित कार्ड एक इक्का छ, खेलाडीहरूले अक्सर एक ‘बीमा’ पक्ष शर्त बाहिर लिन को लागी सक्षम हुनेछ, जसले डीलरलाई दोस्रो कार्ड (‘ब्ल्याकज्याक’ हात) बाट २१ स्कोर गर्दै २१ को बिरूद्ध9देखि od ओड्स दिन्छ।
हिटि and र स्ट्यान्डिंग बाहेक, खेलाडीहरूले निश्चित हातहरूले ‘डबल’ वा ‘स्प्लिट’ पनि गर्न सक्दछन्। दोहोर्‍याएर, तपाईले आफ्नो बटारलाई दुईको साथ एक मात्र कार्डको रेखाचित्रको गुणा गर्नुहुन्छ। तपाईंले 10 वा 11 हातको साथ त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ। विभाजनमा दुई जोडीमा जोडी विभाजित गर्नु र तपाईंको दांव दोहोरो पार्नु समावेश छ।
ब्ल्याकजेक रणनीति संभावनाको चारैतिर घुमाउँदछ। यदि डिलरसँग कम-मूल्यको हात छ, विशेष गरी or वा card कार्ड, उसको / उनको बस्टि ofको सम्भावना बढी छ। यसैले, खेलाडीहरू अपेक्षाकृत कम स्कोरिंग हातको साथ खडा हुने बढी सम्भावना हुन्छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि डिलरले कुनै पनि हातमा मूल्यमा १ 16 सम्ममा हिट गर्नै पर्दछ।
यदि डिलरसँग 8,,, १० वा ११ कार्ड छ भने, खेलाडीहरू सामान्यतया १ 17 भन्दा तल खडा हुनेछैनन्, किनकि हराउने जोखिम बढी हुन्छ। रणनीतिकारहरूले सामान्यतया बीमा शर्त लिने विरुद्ध पनि सल्लाह दिन्छन्। यद्यपि यसले डिलरको ब्ल्याकजेकको बिरूद्ध एक हात हराउने अफसेट गर्दछ, शर्तको नमिल्दोहरू प्लेयरको बिरूद्ध 9: are हो।
ब्ल्याकज्याकको खेल प्राप्त गर्नु सिधा सरल छ यदि तपाईले जूवा खेल्न आवश्यक पर्ने १ legal बर्षको कानुनी उमेर प्राप्त गर्नुभयो। तपाईं अनलाइन वा धेरै शारीरिक क्यासिनो मध्ये एक प्ले गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं प्रत्यक्ष ब्ल्याकज्याक अनलाइनको खेल पछि हुनुहुन्छ भने यो एक राम्रो विचार हो संलग्नताको अघि वेबसाइटको प्रमाणपत्रहरू जाँच गर्न। वैधानिक जुवा साइटहरू जुवा प्राधिकरण द्वारा इजाजतपत्र प्राप्त छन्, जसले खेलाडीहरूलाई अनैतिक अभ्यासहरू वा घोटालाहरू बिरूद्ध सुरक्षा दिन्छ।
के ब्ल्याकजेकले खेलाडीका लागि सबै भन्दा राम्रो समस्याहरू प्रस्ताव गर्दछ?
यदि खेलको लागि सही आधारभूत रणनीति पछ्याउँदछ भने ब्ल्याकज्याकले एक खेलाडीका लागि सबै भन्दा राम्रो अनौंठाहरू प्रदान गर्न सक्दछ। यद्यपि, खेलाडीहरूको सीप स्तर र खेलको नियममा निर्भर गर्दै भिन्नताहरू भिन्न हुनेछन्।
लास भेगास नियमको अर्थ के हो?
लास भेगास नियम शब्दले लास भेगास स्ट्रिपमा खेल खेल्ने तरीकालाई बुझाउँदछ। यी नियमहरूले कुनै खेलाडीलाई कुनै सुरुवाती दुई कार्डहरू माथि डबल गर्न अनुमति दिन्छ, डिलरले सफ्ट -१ on मा हिट गर्नैपर्दछ, र पुन: विभाजन वा बीमा अनुमति छ, तर यो अवधि क्यासिनोमा निर्भर गर्दै अलिक फरक हुन्छ।
ब्ल्याकजेकमा, प्रयोग गर्न सही आधारभूत रणनीति के हो?
प्रयोग गर्नको लागि आधारभूत रणनीति खेल नियमहरूको स्थापित सेटमा आधारित छ। यद्यपि नियमहरू क्यासिनोबाट क्यासिनोमा भिन्न हुन्छन्, त्यहाँ केहि नियम र खेलमा प्रयोग हुने डेकहरूको संख्यामा निर्भर गर्दै केही फरक हुन्छन्।
के एक खेलाडी को दीर्घकालिक अपेक्षाहरु अन्य खिलाडीहरु द्वारा प्रभावित छन्?
एक खेलाडी को दीर्घकालिक आशा अन्य खिलाडीहरु को लागी प्रभावित छैन। लामो दौडमा, एक खराब खेलाडीले केवल उसको वा उनको आफ्नै प्रभाव पार्दछ। एक टेबुलमा अधिक व्यक्तिको मुख्य प्रभाव तालिकाको समग्र विन रेटमा कमी हो।
के त्यहाँ त्यस्तो समय छ जब एक खेलाडीले बीमा वा पैसा लिनुपर्दछ?
आधारभूत रणनीति प्रयोग गर्दा, यो बीमा लिन उचित छैन। लामो अवधिमा लिएको to देखि २ ओड्स धेरै प्लेयरहरूको लागि पैसा लिनुभन्दा राम्रो हुन्छ। यो किनभने लामो दौडमा, एक खेलाडीले अन्तमा एक खेलाडीले दिने राशिको कारण गुमाउने प्रवृत्ति हुन्छ।
ब्ल्याकजेकमा सबैभन्दा खराब सबैभन्दा सामान्य खेल के हो?
ब्ल्याकजेकमा सबैभन्दा खराब खेलहरू मध्ये एक stand, vers बनाम us मा उनीहरूलाई विभाजित गर्नु भन्दा खडा हुनेछ। यसले प्रत्येक पटक डलरमा लगभग ents० सेन्ट हराउने खेलाडीमा परिणाम हुन्छ। यद्यपि, यदि एक खेलाडी आधारभूत रणनीतिको साथ रहन्छ भने, यो चासोको विषय हुनेछैन।
के एक एकल-डेक वा मल्टि-डेक खेल राम्रो ब्ल्याकजेकमा छ?
एकल डेक खेलसँग समान नियमहरूको साथ बहु-डेक खेलमा ०.%% देखि ०..6% फाइदा हुन्छ। यद्यपि खेलमा धेरै जसो प्रभाव कार्डहरू हटाउँदा आउँछ। बहु-डेक खेलमा अनुकूल नियमहरू र सर्तहरू फेला पार्न यो धेरै सजिलो छ।
यदि ब्ल्याकजेक हराउन योग्य छ भने, त्यसोभए तपाईं किन लाखौं डलर बनाउनुहुन्न बरु यसको बारेमा मात्र लेख्नु?
ब्ल्याकज्याक पिटाउन सकिन्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि एक व्यक्ति यो खेल्न धनी हुन सक्छ। सानो बैंकरोलको साथ अत्यन्त कुशल खेलाडीले केहि घण्टा मात्र केही डलर कमाउँछ।
ब्ल्याकजेक को लागी सबै भन्दा राम्रो गणना प्रणाली के हो?
खेलको लागि कुनै पनि राम्रो गणना प्रणालीहरू छैनन्। दिन सकिन्छ उत्तम सल्लाह भनेको चीजहरू सरल राख्नु हो। यसले मानसिक थकावट र त्रुटिहरू उत्पन्न हुनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ। अधिकांश मतगणना प्रणालीहरू एक अर्काको सानो सीमाना भित्रै छन्।
एक खेलाडीले गन्ती कार्डहरू कति पैसा कमाउन सक्छ?
एक खेलाडीले बनाउन सक्ने पैसाको मात्रा खेलाडीको कौशल, बैंकरोल, र जोखिमको मात्रामा निर्भर गर्दछ जुन उनीहरू प्राप्त गर्न इच्छुक छन्। यो सम्भव छ कि पैसा गुमाउन। जहाँसम्म, यदि एक खेलाडीले यी कारकहरूलाई सन्तुलन गर्न सक्छ, तिनीहरूसँग ०. 0.5% देखि १.%% फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छ।
के यो कार्ड गन्ती गर्न अवैध छ?
कार्डहरू गणना गर्न यो अवैध होइन किनकि प्लेयरले कुनै पनि तरिकाले खेल परिवर्तन गरिरहेको छैन। प्लेयर केवल ज्ञान प्रयोग गर्दैछ जुन सबै खेलाडीहरूको लागि उपलब्ध छ। जे होस्, कुनै पनि क्यासिनोसँग कसैलाई पनि खेल छोड्ने वा रोक्नको लागि अधिकार दिन अधिकार छ, किनकी तिनीहरू फिट ठान्छन्।
कार्ड काउन्टरहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो लाभ दिनको लागि के खेल भिन्नताहरू शीर्षहरू हुन्?
ब्ल्याकजेकका लागि शीर्ष खेल भिन्नता बीमा लिने र १ vers बनाम एक डिलरको १० मा खडा हुने कुरा थाहा छ। शीर्ष १ plays नाटकहरू Illustrious १ as को रूपमा जानिरहेका छन्।
क्यासिनोहरू अझै पनी ब्ल्याकजेकको खेल प्रस्ताव गर्छन्, यदि यसलाई हराउन सकिन्छ भने?
क्यासिनोहरूले खेलाडीहरूबाट बढी फाइदा लिन्छन् जो राम्रोसँग कसरी खेल्ने जान्दैनन् वा उनीहरूले कार्ड काउन्टरहरूमा हराउँछ भन्ने ख्याल गर्दैनन्। उनीहरूले to देखि as जस्ता भुक्तानहरू गरेर पनि नोक्सान बनाउन सक्दछन् जुन धेरै अज्ञात खेलाडीहरूलाई आकर्षक छ।
के ब्ल्याकज्याकको खेललाई कार्ड गणनाको बाहेक अरू कुनै तरिकाले हराउन सम्भव छ?
समयको साथ खेलाडीहरूले खेलहरू कसरी सेट अप हुन्छन् र कम फाइदा लिनको लागि कमांडहरू पत्ता लगाउन सक्षम भएका छन्। आज प्राय जसो क्यासिनोहरूमार्फत यी कमहरूहरू फेला पारिएका छन् र निश्चित गरिएको छ। यद्यपि समय-समयमा केहि अनुकूल नियम र पदोन्नतिहरू भेट्टाउन सम्भव छ।
ब्ल्याकजेकको खेलमा, मूल्या important्कन गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू के हुन्?
यदि एक खेलाडी एक कार्ड काउन्टर हो, तिनीहरू उत्तम प्रवेशको साथ एक द्रुत-गतिको खेल हेर्न चाहन्छन्। आधारभूत रणनीति खेलाडी एकल डेक खेल खोज्दै छन जुन उत्तम नियमहरू र विकल्पहरू उपलब्ध छन्। एक खेलाडीले ढिलो डीलरहरू, पूर्ण एकल डेकहरू, र उदार क्षतिपूर्तिको खोजी गर्दैछ।
ब्ल्याकज्याकमा केहि राम्रा लेखिएका पुस्तकहरू के हुन्?
दुई शीर्ष ब्ल्याकजेक किताबहरू बीट डिलर हो: एक विजिट रणनीति फर द गेम अफ बीस-वन
एडवर्ड थोरप र थ्योरी अफ ब्ल्याकजेक बाट: पूरा कार्ड काउन्टर गाईसका लागि क्यासिनो गेम २१ को पिटर ग्रिफिन।
ब्ल्याकजेकमा कसरी जित्ने भनेर सिक्नको लागि पहिला एक खेलाडीले के गर्नुपर्छ?
एक खेलाडी विभिन्न रणनीतिहरूको बारेमा पढेर राम्रो ब्ल्याकजेक खेलाडी हुन जान्न सक्छ। एक खेलाडीले उनीहरूको बेट सानो राख्नु पर्छ र पूर्ण आधारभूत रणनीति विधि सिक्नुपर्दछ। सँधै कुनै पनि रणनीतिमा सावधान रहनुहोस् जुन १.%% भन्दा बढी फाइदाको प्रतिज्ञा गर्दछ।
के कार्ड काउन्टरहरू अझै क्यासिनोबाट प्रतिबन्धित छन्?
क्यासिनोहरू अझै खेलाडीहरू प्रतिबन्ध गर्न सक्षम छन् उनीहरूले उनीहरूको तल्लो रेखामा खतराको रूपमा हेर्छन्। क्यासिनो निजी संस्था हुन् र उनीहरूलाई आमन्त्रित गर्न वा निमन्त्रणा गर्न सक्छन् कसैलाई पनि। यो क्यासिनोले नाफा कमाउन सक्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न गरिन्छ।